FBC - Hojjattoonni waajjirichaa caasaa haaraa hojjatamee ji’a sagal miindaansaa osoo hin kaffalaminif xalayaa birootiin bakka bu’uusaa irratti komii dhiheessan
Finfinnee, Ebila 10, 2009 (FBC) Hojjettoonni Waajira Olaanaa Oditara Muummichaa Oromiyaa caasaan iskeelii miindaa waajirichaaf hojjetamee xalayaan ramaddii nuu kenname ji'a sagaliif mindaasaa osoo hin argatin, amma xalayaa birootin akka bakka bu'uusaan komii qaban ibsan.
Iskeelii miindaa haaraa kaffaluuf hanqinni bajataa waan jiruuf yeroo muraasaaf akka obsanii eegan itti himamaa turus, amma garuu iskeelii miindaa akka biyyaatti Amajjiitti fooyye'e nuu kennanii jechuun hojjatootni waajiricha komii qaban Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti kan himan.
Biiroon Pablik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa gamasaatiin, ammas dhimmicha hojjetaa fi qaamolee dhimmichi ilaallatuu wajjin teenyee mari'annee fala itti kennuu qabnaa jedheera.
Odiitarri Muummichaa Oromiyaa raawwii hojiisaa yaa'ii idilee Caffee Oromiyaatiif wayita dhiyeessu dhumarratti hanqina jedhee kanneen dhiyeessu keessaa tokko ogummichi cimaa kan barbaadamuu fi gabaa qabu ta'uusaatiin odiitarri miindaa caalmaa argatee gadhiisuun dhimma mataa dhukkubbii nutti ta'eeraa jechuun Iskeelii miindaa addaa akka eyyemamu gaafatamaa turuusaa kan yaadatamudha. .
Haaluma kanaan Waajirri Oditara Muummichaa hojjettootasaa dorgomsiisee ramaduudhaan xalayaa kan raabseef guyyaa gaafa 12 ji'a 12ffaa bara 2008dha. Waajirichi caasaatiin hojjetoota ramaduusaas Biiroo Pablik Sarvisii fi misooma qabeenya Namaa Oromiyaa beeksisee; Biirichis akkaataa ramaddichaatiin hojiirra akka ooluuf xalayaa gaafa 28 ji'a 11 bara 2008 barreesseen mirkaneesseeraaf. Isa kanas Biiroo Maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee beeksiseera.
Hojjettoonni Waajira Oditara Muummichaas ramaddiisaanii haaraatiin ramadamanii hojii kan eegalanis Adoolessa 1 bara 2008dha. Ji'a 10ffaa qabataniiru hanga har'aatti garuu miindaan haaraa osoo hin kaffalamiiniif jira. Bajata hin qabnuudhaan har'a bori osoo jedhamuu dhimmichi bubbuleedha. Tutturuun kunimmoo dhimma ulfaataa tokko itti fidee dhufeera. Hojjetaan al-takkaatti kumni ja'a torba dabalameefii xalayaan kennameefii abdiin guutamee gammade, xalayaan mardoo fakkaatu itti dhufeera.
Caasaa JBHAn qoratamee iskeelii miindaa hojjetaa Waajirichaa qofaaf hojjetameen xalayaan ramaddii hojjettootaaf kenname ji'a sagal boodammoo xalayichi hafee kan biraan isiif haa kennamuu jedhamee xalayaa iskeelii miindaasaanii isa duraa harka walakkaa ta'uun kute biraanimmoo kennameeraafi. Akka biyyaatti siivil sarvaantotaaf jedhamee fooyya'iinsa iskeelii miindaa hojiirra ooletu kennameefi. Kanadha hojjettoonni Waajjirichaa seeraanis dhorkaadha kan jechaa jiran. Duraanis hojjetaa waajicha gadhiisu ittisuuf Iskeelii miindaa addaa haa kaffalamuuf jedhamee waan kun hojiirra ooleef ammamoo siivil servaantii wajjin maaliif walbiraqabameedha.
Waajirri Odiitarasaaniin bakka bu'eefii waan falmuufii dideef, Biiroon Pablik Sarvisii fi misooma qabeenya Namaas komiisaanii dhaga'uullee waan dideef Abukaatoo bitatanii mana murtii hawaasummaa sivil sarvisii Oromiyaa biiricha jalatti bulutti himatanii iyyata harkaa fuuchuu akka didedha.
Abukaatoonsaanii Obbo Fiqaaduu Hundumaa, seerri mana murtii dhimma kana ilaalu Oromiyaan baase hundeemaayyuu rakkoo qabaa jedhu.
Seerichi garuu foyya'uu akka qabu amanamee gara fooyyessuutti deemamaa akka jiru Biiricharraa dhageenyeerra.
Dhimma hojjettoota kanaarratti hundumasaarratti mallatteessanii xalayicha kan qajeelchaa turan Hoogganaa Ittaanaan Biirichaa fi Ittigaafatamaan Dhimmoota Sivil Sarvisii Obbo Takkaalign Biraaneen dhimma kanarratti yaada kennuu hin barbaaduudha kan jedhan.
Hoogganaan Biirichaa Dr Biqilaa Hurrisaammoo dhimmichayyuu akka hin beekne kan hubanne, kunis jedhanii fi xalayaan Biiroosaanii maqaa dha'atee ba'u kan walfaallessu ta'uusaati. Isaan kan jedhan hojjetaaf ramaddiin kennamuusaa Biiroon keenya hin raggaafneefi Biiroon Maallaqaa fi walta'iinsa dinagdeemmoo hin beekuyyuu jedhu.
Mana murtii isaan jala jiruuf dhiyaachuusaas didamuusaas hin beekani.
Xalayaan ramaddiin hojjetootaa akka raawwatuuf eyyemu chaappaa Biiroo Pablik Sarvisii fi misooma qabeenya Namaa Oromiyaatiin ba'e jira taanaan akkaataama jedhameen ni raawwannaa yaada jedhu kan qabus dubbatu.
Oduuwwan Biroo « Horsiisee-bulaan loon qabu lakkoofsa hir’isee haala ammayyaan jireenya isaa akka hin-foyyeffanne kan dhorku maali?	Koomiishinichi midhaan deeggaramtoota akka qaqqabuuf hojjetamaa jira jedhe »